आत्मविश्वासका साथ काम गरे असम्भव केहि छैन - Mitho Khabar
February 8, 2020 mithokhabarLeaveaComment on आत्मविश्वासका साथ काम गरे असम्भव केहि छैन
स्यान्डोले आफ्ना पितासँत सोधे-बाबा, के यी प्रतिमा काल्पनिक हुन् ? के मानिसको यस्तो अद्भूत स्वास्थ्य सम्भव छ ? छोराको प्रश्न सुनेपछि उनका पिताले आत्मविश्वाससाथ जवाफ दिए-बाबु, यी सबै मूर्ति यथार्थ हुन्, कुनै कल्पना होइनन् । मानिसको यस्तो स्वास्थ्य, यस्तो सुगठित शरीर र मसल हातपाखुरा सम्भव छ । नियमित व्यायाम गर्‍यौ, प्रशस्त परिश्रम गर्‍यौ र खानपिनमा ध्यान दिन सक्यौ भने तिमीले पनि यस्तै स्वास्थ्य प्राप्त गर्न सक्छौ । तिम्रो पनि यस्तै सुगठित शरीर सम्भव छ ।
परिणामतः उनी एक ख्यातिप्राप्त बलवानका रूपमा विख्यात भए । उनले शारीरिक व्यायामका अनेक नियम र विधि पत्ता लगाए । आजको दिनमा पनि उनका यी शारीरिक व्यायामका विधिलाई ‘स्यान्डो कला’का नामले चिनिन्छ । आखिर आत्मविश्वास र लगन भयो भने यो संसारमा असम्भव भन्ने के नै छ र ?